စတက်ဖ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အနောက်တိုင်းဂီတပညာတွင် စတက်ဖ်သည် အလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းငါးကြောင်းနှင့် မျဉ်းကြားအတွင်းအကွက်လေးကွက်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ ဂီတနုတ်စ်များ၊ ဘားလိုင်းများ၊ ကလက်ဖ် (clef) များ စသည်တို့ကို ထိုနေရာ၌ရေးသားသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် "Stave" ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မူ "Staff" ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ သို့သော် ယင်းအခေါ်အ‌ဝေါ်နှစ်ခုလုံး၏အများကိန်းသည် "Staves" ဖြစ်သည်။
ဂီတနုတ်စ်များကိုရေးသားသည့်အခါတွင် နုတ်ဟက်ဒ် (Notehead) ခေါ် နုတ်၏ဦးခေါင်းသည် မျဉ်း၏အလယ်တည့်တည့် သို့မဟုတ် မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကြားအကွက်တွင်းသို့ဝင်အောင်ရေးရသည်။ နုတ်စ်တို့သည် စဆက်ဖ်၏အပေါ်သို့ရောက်လေ ထိုနုတ်စ်တို့၏ အသံ (Pitch) သည်မြင့်‌လေ‌ဖြစ်သည်။ အောက်သို့ရောက်လေ အသံမှာနိမ့်လေဖြစ်သည်။
စတက်ဖ်၏ပြင်ပတွင် နုတ်စ်များရေးရမည့်အခါတွင် လယ်ဂျာလိုင်း (ledger line) ခေါ်မျဉ်းတိုကလေးများဖြင့်ရေးသားရသည်။ စတက်ဖ်၌ရှိသော နုတ်စ်တို့၏အမည်တို့သည် ရေးသားထားသောကလက်ဖ်ကိုလိုက်၍ပြောင်းနိုင်သည်။
စတက်ဖ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော စတက်ဖ်များကို‌ဒေါင်လိုက်မျဉ်းရှည်ဖြင့်ချိတ်ဆက်လျှင် စနစ်ခေါ် system တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုဒေါင်လိုက်မျဉ်းရှည်အပြင် ကွင်းဖွင့်တစ်ခုဖြင့်ထက်မံရေးဆွဲထားလျှင် ဂီတတူရိယာများကို အုပ်စုဖွဲ့ထားခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ တွန့်ကွင်း (Brace) ဖြင့်ချိတ်ဆက်လျှင် တူရိယာတစ်ခုကိုသာကိုယ်စားပြုလေ့ရှိပြီး၊ လေးထောင့်ကွင်း (Bracket) ဖြင့်ချိတ်ဆက်လျှင် သံစုံတီးဝိုင်းကြီးတွင်တီးခတ်သည့်တူရိယာများကိုအုပ်စုခွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဂရန်းစတက်ဖ် (အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်: Grand Staff၊ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်: Great Stave) သည် ထရီဘယ် ကလက်ဖ် (Treble Clef) နှင့် ဘေ့စ်ကလက်ဖ် (Bass Clef) ပါဝင်သော စတက်ဖ်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ရာမှဖြစ်လာသည်။ စန္ဒရား၏အလယ်ခလုတ်ဖြစ်သော စီနုတ် (Middle C) ကိုဗဟိုပြုထားသည်ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။
စန္ဒရားတီးခတ်ရာတွင် ထရီဘယ်ကလက်ဖ်ကို ညာလက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘေ့စ်ကလက်ဖ်ကို ဘယ်လက်ဖြင့်လည်းကောင်း တီးခတ်လေ့ရှိသည်။ အော်ဂန်တွင်မူ ခြေနင်း ခေါ် ပက်ဒယ် (Pedal) အတွက် စတက်ဖ်အပိုတစ်ခုပါရှိသည်။
↑ Irvine, Demar; Pauly, Reinhard G.; Radice, Mark A. (1999). Irvine's writing about music. Hal Leonard Corporation. p. 213. ISBN 978-1-57467-049-3. Retrieved 18 October 2011
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စတက်ဖ်&oldid=604293" မှ ရယူရန်
၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။